उजुरीकर्ता नै नआएपछि ठमेलका गुण्डा बम छुटे | abc.com.np
उनले क्लबमा नाच्ने आउने धेरैको सिक्री, औंठी लेट्ने गरेको प्रहरीलाई सूचना प्राप्त भएपनि पीडितले उजुरी नगरेका कारण हालसम्म उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन् । नशा खुवाएर लुटेको करोडौं अवैध सम्पत्ति बमले अहिले ठमेलको एक क्लबमा लगानी गरेका छन् । एमालेका युवा नेता ऐन महरको संरक्षणमा ठमेलमा गुण्डागर्दी गर्दै आइरहेका बमको अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट खटिने टोलीसँग पनि उठवस रहेको छ । विशाल तामाङले उनीमाथि उजुरी हाल्ने वित्तिकै उक्त मुद्दा मिलाउन उनीहरुकै मोटरसाइकलमा बसेर दौडधुप पनि गरेका थिए ।
अन्तत: विशाललाई थर्काउन सफल भएपछि बम प्रहरीको हिरासतमा बस्नबाट जोगिए । विशाल तामाङको उजुरीमा पक्राउ गरिएको भएतापनि उजुरीकर्ता नै उपस्थित नभएपछि वकिल बमलाई छाडिएको लौनचौन बृत्तका प्रमुख डीएसपी सोमेन्द्रसिंह राठोरले बताए । उनले पीडित कसैले उजुरी दिएमा उनलाई पक्राउ गरि कारवाही गर्ने पनि बताए । केटी सप्लाई गर्नेदेखि क्लबमा सुन लगाएर आउने युवतीको सिक्री, औंठीलगायत महंगा गरगहना लुट्ने काममा सक्रिय बमले ठमेलको ट्याक्सी चालकसँग मिलेर मादक पदार्थ सेवन गर्नेको सूचना दिई विचबाटोमा लुट्ने धन्दामा समेत उनी सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो । तर पयाप्त प्रमाण नभेटिएपछि प्रहरीले अहिलेसम्म उनलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न सकेको छैन् ।
बाउन्सरको काम गर्ने वकिलसँग कसरी करोडौं रकम आयो ? यस्तै प्रश्न उठिरहेकै बेला बमले इविजा डिस्कोमा लगानी गरेका छन् । उक्त डिस्कोको केहि समय पहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री बलबहादुर महतले उद्घाटन गरेर विवादमा परेका थिए । बिवादास्पद व्यक्तिको लगानी रहेको इविजा डिस्को उद्घाटन गर्न किन राज्यमन्त्री महत पुगे ? शंका उब्जेको थियो । एमालेकै सरकारले डन दिनेश अधिकारी उर्फ चरीको ईन्काउण्टर गरेपछि डनगिरी सान्त भएको छ । तर वकिल बमहरु जस्ता गुण्डाले राजनीतिक संरक्षणमा अहिले फेरि डनगिरी गर्न सक्रिय भएका छन् । विगत सात महिनादेखि सञ्चालनमा आएको इविजा क्लबमा केहि भ्रष्ट प्रहरीको समेत लगानी रहेको बुझिएको छ । उक्त डिस्को फायर क्लब सञ्चालन गरिरहेका दवाङ तामाङ, राजु दुनै, राम थापा र बमलगायतको समूहले सञ्चालनमा ल्याएको हो । ठमेलमा गुण्डागर्दी गरेकै कारण तत्कालिन एसएसपी रमेश खरेलले उनलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका थिए । डन दिपक मनाङ्गे निकट मानिने बलले युवा संघको आबरणमा गुण्डागर्दी गर्दै आएका छन् ।